बच्चाहरूको लागि जूँको उपचार: यदि तपाइँको बच्चाको टाउकोको जुँगा छ भने के गर्ने - स्वास्थ्य शिक्षा | सेप्टेम्बर 2021
घरपालुवा जनावर चेकआउट औषधि जानकारी, स्वास्थ्य शिक्षा कम्पनी समुदाय, कल्याण खेलहरु कल्याण प्रेस कम्पनी, चेकआउट स्वास्थ्य शिक्षा, कल्याण समाचार औषधि बनाम मित्र स्वास्थ्य शिक्षा, समाचार औषधि जानकारी, समाचार कम्पनी, स्वास्थ्य शिक्षा
मुख्य >> स्वास्थ्य शिक्षा >> बच्चाहरूमा जुँडीहरूलाई कसरी रोक्न सकिन्छ
बच्चाहरूमा जुँडीहरूलाई कसरी रोक्न सकिन्छ
अन्तहीन खोकी र छींक, नाकबाट बग्ने नाक, र अस्पष्ट खारिज बम्पहरू — बच्चाहरू जीवाणुहरूको लागि चुम्बक जस्तो देखिन्छ। हाम्रो अविभावकको बाल्यकालका बिरामीहरूको गाईडमा, हामी लक्षणहरू र उपचारहरूको बारेमा कुरा गर्दछौं जुन सामान्य अवस्थाको लागि हो। पूर्ण श्रृंखला यहाँ पढ्नुहोस्।
जुँलाहरू के हुन्? | टाउकोको जुँलाको लक्षण | निदान | बच्चाहरूको लागि जूँको उपचार | जूँका लागि घरेलु उपचार | रोकथाम
एक दिउँसो, डेकेयरमा मेरो कक्षाका बच्चाहरू बिस्तारै नेपटाइमबाट ब्यूँझिरहेका थिए, म चुपचाप कथाहरू पढ्दा म आफ्नो काखमा दुई निन्द्रा बच्चाहरू संग बसे। यो निर्ममता द्रुत रूपमा बाधा भयो जब मैले एउटा केटाको केशमा कपालको घाउ देखेको थिए। मैले दुबै बच्चाहरूलाई तल राखें र दुई चोटि जाँच गरें कि मेरा आँखाले मलाई धोका दिएन। त्यस दिन पछि, बच्चाको आमाको फोन कलले मेरो श susp्कालाई पुष्टि गर्यो - बच्चाको जुँगा थियो। अर्को कक्षामा उनीहरूको भाइबहिनीले त्यसो गर्यो। यसैले कहिलेकाँही डेकेयर घटना शुरू भयो जुन मलाई पौंस पैनिक भन्ने लाग्दछ।
चिढचिढो हुँदा, अनुहार सामान्यतया खतरनाक हुँदैन, तर तिनीहरूले धेरै हलचलको कारण दिन्छ!
जुँलाहरू के हुन्?
टाउकोको जुँटो साना कीराहरू हुन् जुन मानव कपालमा बाँच्दछन् र स्कल्पको रगतमा खान्छन्। तिनीहरू सजिलैसँग अर्को व्यक्तिमा जान्छन्, विशेष गरी नजिकको सम्पर्कबाट, तर टोपी र हेयरब्रस जस्ता साझा वस्तुहरूबाट पनि फैलिन सकिन्छ। तिनीहरू उडान वा उफ्रिदैनन्। टाउकोको जुत्ता खतरनाक हुँदैन र रोग फैलाउँदैन।
शिरको जुँगा शरीरका जुँगा भन्दा फरक हुन्छन्। नामहरूले सुझाव दिए जस्तै, टाउकोको जुँगा टाउकोमा जीवित छन्, र शरीरको जुँगा शरीरमा जीवित छन्। तिनीहरू बिभिन्न कारणहरू र उपचारहरूको साथमा फरक परजीवीहरू हुन्। यो लेखको उद्देश्यका लागि, जुँगाले हेड जुँहरूलाई स will्केत गर्दछ।
जूँ कती साधारण छन्?
लगभग To देखि १२ मिलियन संयुक्त राज्य अमेरिकामा to देखि ११ वर्ष उमेरका बच्चाहरू बीच प्रत्येक वर्ष जूँको प्रकोप देखा पर्दछ।
वर्षको कुनै एक समय म जूँराको घटनाहरूमा उदासीनता देख्न चाहन्छु ग्रीष्मको अन्त्यतिर र स्कूल वर्षको सुरूतिर, एमडी, संस्थापक इरुम इलियास भन्छन् मोन्टगोमेरी त्वचाविज्ञान पेन्सिलभेनिया मा। धेरै शिविर र स्कूल वर्ष को शुरुआत संग जोडिएको छ।
जबकि जूँ सामान्यतया ठाउँहरूमा बच्चाहरू मार्फत फैलिन्छ बाल हेरचाह केन्द्रहरू र स्कूलहरू , वयस्कहरूले जूँ पनि समात्न सक्दछन l अक्सर जुम्राको साथ परिवारको सदस्यबाट।
सम्बन्धित: कसरी बच्चाहरू सबै वर्ष स्वस्थ राख्न
जुँडा कस्तो देखिन्छ?
जुम्रा साना हुन् ( लगभग २- mm मिमी, तिलको बीजको आकार ) पखेटाविना बगहरू जुन सामान्यत: फिक्का र खरानी छन्, यद्यपि तिनीहरूको रंग फरक हुन सक्छ।
जूँले क्याट्समा अण्डा पार्छ जसलाई निट्स भनिन्छ। निट लगभग ०.8 मिमी लामो र ०.। मिमी चौडा हुन्छन् र अंडाकार जस्तै आकारका हुन्छन्। अण्डा छोडी पछि निट कपालमा अडिग रहन्छ। तिनीहरू पहेँलो वा सेतो रंगको छन् र केशको रंगमा दाग लाग्न गाह्रो हुन सक्छ।
भर्खरै टोपीको जुँगा, जसलाई अप्सरा भनिन्छ, पिनहेड (१. 1.5 मिलिमिटर) को आकारको हुन्, र वयस्कको जुँगा जस्तो देखिन्छ तिनीहरू लगभग एक हप्तामा हुनेछन्।
जुँवा प्रकोपको लक्षणहरू समावेश:
कसरी एक नराम्रो कान बाट छुटकारा पाउन
टाउकोमा खुजली (जुँगेहरू पसे पछि केहि हप्ता सम्म चिला रहन्छ)
केशमा केही हिँड्दाको अनुभूति
कठिनाई निन्द्रामा (टाउकोको जुँवाहरू अँध्यारोमा अधिक सक्रिय हुन्छन्)
छालाबाट जीवाणु घाउमा छिर्दा परिणामबाट कोरिन / संक्रमणबाट टाउकोमा घाउहरू
दृश्यमान NIT वा जूँ
यो खुजली सुरु हुन हप्ता लाग्न सक्छ, तर अन्य लक्षणहरू देखापर्नु भन्दा अघि निट र जुँला कपालमा देख्न सकिन्छ विशेष गरी कानको पछाडि र टाउकोको पछाडि नेकलाइन नजिकै। यो छ थप साधारण सक्रिय, वयस्कको जुँहरू हेर्नको लागि nits हेर्न। जुत्ता अण्डा / एनटहरू प्रायः टाउकोको नजिक फेला पर्दछ।
के तपाईंले जुँवाहरूका लागि डाक्टरलाई भेट्नु पर्छ?
तपाईंले जूँका लागि डाक्टरलाई हेर्नु आवश्यक पर्दैन यदि एक परिवार विश्वस्त छ (भूतपूर्व अनुभव वा चिकित्सक गुगलबाट) कि तिनीहरूले जुँवासँग व्यवहार गरिरहेका छन् भने, Ashanti वुड्स , MD, बाल्टिमोरमा मर्सी मेडिकल सेन्टरमा बाल रोग विशेषज्ञ। यदि अनिश्चित छ यदि एक बच्चा वा परिवारका सदस्यले जुँगा बनाम खराब डान्ड्रफ बनाम सोरायसिससँग व्यवहार गरिरहेको छ भने, त्यसो भए, एक चिकित्सक वा चिकित्सा प्रदायक देख्नु पर्छ।
धेरै जसो म देख्छु कि त या त उपचार प्रतिरोधी मुद्दाहरु हुन्, जसमा परिवारका धेरै सदस्यहरुमा फैलिएको मुछिएको हुन्छ जसको परिणामस्वरूप यसको अगाडि बढ्नमा कठिनाई हुन्छ, वा डाक्टर इलियास भन्छन।
जूँ प्राय: जुत्ताको जाँचको समयमा फेला पार्न सकिन्छ, जहाँ शिक्षक वा स्कूल नर्सले प्रत्येक बच्चाको टाउकोमा जुम्राको लागि जाँच गर्दछ जब स्कूलमा एक विद्यार्थीको जुँवाको पत्ता लागेको छ वा त्यहाँ शंकास्पद प्रकोप छ।
बच्चाहरूका लागि टाउकोको जूँको उपचार
त्यहाँ जुँहरूका लागि ओभर-द-काउन्टर उपचारहरू छन्, भन्छन् तान्या कोरमेली , एमडी, सान्टा मोनिका, क्यालिफोर्नियामा एक बोर्ड-प्रमाणित त्वचा विशेषज्ञ। त्यहाँ प्राकृतिक, गैर-कीटनाशक उपचारहरू छन् जसमा विभिन्न तेल र साबुनहरू सामेल छन्। त्यहाँ कीटनाशकहरू छन् जुन एफडीए अनुमोदित छ।
सामयिक उपचारको अतिरिक्त, सामान्यतया कपालको कपालबाट जुँगा र निटहरू मैन्युअल्ली हटाउनु आवश्यक हुन्छ। यदि तपाईं कहिले अभिव्यक्तिको बारेमा सोच्नुहुन्छ भने, 'nitpicker,' तपाईंलाई थाहा हुनेछ किन यो यस्तो गहन बयान हो! डा। कोरमेली भन्छन्।
कार्यको उत्तम कोर्स एक संयोजन उपचार हो। डाक्टर वुड्स भन्छन्, सामयिक उपचार (पेडिकुलिसाइड्स भनिन्छ), म्यानुअल हटाउने (भिजेको कम्बि as भनेर चिनिन्छ), र / वा मौखिक उपचार (जुटेका केसहरूका लागि) सबै जुँहरू उपचार गर्ने दस्तावेज तरीका हुन्, डा वुड्स भन्छन्। घरेलु उपचार (भिजेको कम्बि)) काम गर्छ, तर बिरामीहरूले अन्ततः उनीहरूको लक्षणहरूको पुनःभर्जन देख्न सक्छन्। तसर्थ, एक सामयिक उपचार अक्सर राम्रो हो वा एक घरेलू उपचार संग उत्तम प्रयोग।
ओभर-द-काउन्टर जूँ उपचार
जूँको उपचारका लागि यु.एस. फूड एण्ड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन (एफडीए) द्वारा अनुमोदित केहि ओभर-द-काउन्टर (ओटीसी) औषधिहरू:
औषधि ब्रान्ड नाम (हरू) कुपन प्राप्त गर्नुहोस्
Permethrin लोशन (१%), केहि छैन कुपन प्राप्त गर्नुहोस्
पायरेथ्रिन-आधारित उत्पादनहरू (उदाहरण, जुम्रा शैम्पू वा मूस) A-200, हत्या, आरएन्डसी,RID, चाँडै, ट्रिपल एक्स कुपन प्राप्त गर्नुहोस्
प्रिस्क्रिप्शन जूँको उपचार
जूँको उपचार गर्नको लागि एफडीएद्वारा अनुमोदित केही औषधिहरू:
मलाथियन लोशन (०.%%) ओभिड कुपन प्राप्त गर्नुहोस्
Benzyl रक्सी लोशन(%%) Ulesfia लोशन कुपन प्राप्त गर्नुहोस्
Spinosad सामयिक निलम्बन (०.9%) नाट्रोबा कुपन प्राप्त गर्नुहोस्
Ivermectin लोशन (०.%%) सन्दर्भ कुपन प्राप्त गर्नुहोस्
जुत्तालाई औषधीको उपचार गर्न, प्रयोग गर्नुहोस् आधारभूत चरणहरू अनुसरण गर्दै (उपचार को व्यक्तिगत रूप को लागी दिशाहरु संग जाँच गर्नुहोस् र ती दिशाहरु को लागी पनी प्रक्रियामा एक द्वंद्व छ भने):
बच्चाको लुगा हटाउनुहोस् (बच्चाको आराम स्तरमा)।
लागू गर्नुहोस् र बक्समा निर्देशनहरू अनुसार वा लेबलमा छापिएको अनुसार तातो पानीको साथ औषधि कुल्ला। उपचार लामो समय सम्म रहनको लागि ध्यान दिनुहोस्।
बच्चालाई सफा लुगा लगाउन लगाउनुहोस्।
आठ देखि १२ घण्टामा कपाल जाँच गर्नुहोस् — यदि केहि जीवित जुँगा रहेछन्, तर सामान्य भन्दा ढिलो गतिमा अघि बढिरहेछन् भने पुन: उपचार नगर्नुहोस्। जुँला मार्न १२ घण्टा भन्दा बढी लाग्न सक्छ। यसको साटोमा, निट्स, मृत जुँगा र बाँकी प्रत्यक्ष जुँगा हटाउनका लागि राम्रो दाँत क comb्गा प्रयोग गर्नुहोस् (यदि कुनै छ भने)
कपाल जाँच गर्नुहोस् र दोहोरिने सम्भाव्यता कम गर्न दुई वा तीन हप्ताको लागि दुई दुई दिन तीन दिन सम्म नाइट कंघी (फाँट-दाँत कंघी) को साथ कंघी गर्नुहोस्। कहिलेकाँही दोस्रो उपचार आवश्यक हुन सक्छ।
भिजेको कing्गिंग कसरी गर्ने:
बच्चाको कपाल भिजाउनुहोस्।
एक पटकमा एक सानो खण्डमा दाहिने दाँत कंघीको साथ बच्चाको कपाल मार्फत कंघी। विशेष रूपमा नाइट हटाउनका लागि बनाइएको विशेष कम्बिजहरू उपलब्ध छन् — फार्मेसी वा अनलाइन जाँच गर्नुहोस्। घरपालुवा जनावरहरूको लागी फ्लाई कंघी पनि प्रभावकारी छ।
प्रत्येक कंघीको माध्यम पछि, भिजेको कागज तौंलीमा कंघी मेटाउनुहोस्। ध्यानपूर्वक कंघी, बच्चाको स्क्याल्प र कागज तौलिया जाँच गर्नुहोस्।
सबै कपाल कंघी नभएसम्म कंघी र जाँच दोहोर्याउनुहोस्।
जूँका लागि घरेलु उपचार
प्राकृतिक उपचारहरू उपलब्ध छन्, तर ती प्रभावकारी नहुन सक्छन्। यसमा मेयोनेज, पेट्रोलियम जेली, मार्जरीन, वा जैतुनको तेल जस्ता चीजहरूले जूँको श्वास रोक्ने काम गर्दछ।
अत्यावश्यक तेलहरू जस्तै यलlang या y्ग वा चिया रूखको तेल सिफारिस गरिदैन किनभने उनीहरूले एलर्जी छालाको प्रतिक्रिया दिन सक्छ। पेट्रोल वा केरोसिन जस्ता रसायनहरू कहिले पनि प्रयोग नगर्नुहोस् (जुँवा र अन्य कुनै चीजको लागि उपचारको रूपमा)।
[जूँको उपचार गर्नु] समय खपत गर्ने र मनोवैज्ञानिक रुपमा कडा छ, डा। कोरमेली भन्छन्। तपाईलाई जताततै खुजली लाग्न सक्छ, र त्यो सामान्य हो, किनभने जो जुँवाको बारेमा सोच्दछ उसलाई जताततै खुजली लाग्न सक्छ। यसको मतलब यो होइन कि तपाइँ जताततै संक्रमित हुनुहुन्छ!
केही विद्यालयहरूको नो-नीट नीति छ जसमा जूँको उपचार गरीरहेका बच्चाहरू जुँगाको स left्केत नहुञ्जेल फर्कन सक्तैनन्, कहिलेकाँही बच्चाहरूलाई जूँ-मुक्त मान्न योग्यको व्यक्तिको नोट चाहिन्छ। धेरैजसो डाक्टरहरू यस नीतिसँग असहमत हुन्छन्, यसको सट्टा सिफारिस गर्छन् कि बच्चालाई घरमा जुँहाको लागि उपचार गर्नुपर्नेछ र भोलिपल्ट फिर्ता आउनुहोस्।
लोकप्रिय गलत धारणा (र स्कूल यार्ड ताउन्ट्स) को विपरित, जुँहरूका फोहर वा सफा कपालको प्राथमिकता हुँदैन। सरसफाइको बानीले टाउकोको जुत्तामा कुनै प्रभाव पार्दैन।
किनकि जुत्ता प्रत्यक्ष सम्पर्क (टाउको देखि टाउको सम्पर्क टोपी र हेलमेट जस्तै, कंघी को साझा, आदि) बाट फैलिएको छ, आमा बुबा को एक उनको कपाल राख्नु को महत्त्व मा जोड्नु पर्छ र उहाँ आफैलाई हेडगेयर, डा वुड्स भन्छन्। साथै, केटाकेटीहरूले अन्य बच्चाहरूलाई जोगाउनु पर्छ जो जूँको रूपमा चिनिन्छ शर्त एकदम संक्रामक छ।
केहि अन्य चरणहरू जूँको फैलावट रोक्न मद्दत गर्नको लागि:
एक पीडित व्यक्ति द्वारा प्रयोग गरिएको कंघी र ब्रशेहरू तातो पानीमा (कम्तिमा १ 130० डिग्री फरेनहाइट) पाँचदेखि १० मिनेटसम्म भिजाउनुपर्दछ।
संक्रमित व्यक्ति द्वारा हालै प्रयोग गरिएको पलंग, ओछ्यान वा तकियामा बिछ्याउने नगर्नुहोस्।
कम्बो, ब्रशेज, तौंली, टोपी, र भरिएका जनावरहरू जस्ता व्यक्तिगत वस्तुहरू साझेदारी नगर्नुहोस्।
मेशिन धुने र मेसिन सुक्खा (उच्च गर्मी को उपयोग गरेर) कुनै पहिरन, ओछ्यान, वा उपचार पहिले दुई दिन को दौरान एक प्रभावित व्यक्ति द्वारा प्रयोग आइटम।
सुख्खा कुनै पनि चीज जुन सफा गर्न सकिने मेसिनबाट सफा हुँदैन, वा यसलाई छापिएको झोलामा कम्तिमा दुई हप्ताको लागि राख्नुहोस्।
ठूला वस्तुहरू जुन हटाउन वा धुल्न सकिदैन घरको जुँगा स्प्रेको साथ उपचार गर्न सकिन्छ, जस्तै पर्मेथ्रिन ०.%% होम स्प्रे।
भुइँ र फर्नीचर भ्याकुम। पछि झोला फ्याक।
परिवारका अन्य सदस्यहरू जाँच गर्नुहोस्। तपाईंको स्वास्थ्य सेवा प्रदायकलाई सोध्नुहोस् कि उनीहरूले सम्पूर्ण परिवारलाई सावधानीको रूपमा व्यवहार गर्ने सल्लाह दिन्छन्।
जबकि इन्टरनेट उत्पादनहरु को लागी सुझावहरु भरिएको छ कि जुँगा हटाउन र रोक्ने दाबी गर्छ, तिनीहरूको प्रभावकारिता र सुरक्षा शंकास्पद छ र व्यापक रूपमा सिफारिस गरिएको छैन।
के गर्ने जब औषधीहरूले तपाईंको छाला सुख्खा बनाउँछन्
कसरी स्वास्थ्य बीमा बिना एक शारीरिक प्राप्त गर्न
तपाइँको लागी धेरै धेरै सोडियम खराब छ
के म योजनाbगोली ४ दिन पछि लिन सक्छु
सुख्खा खोकी को लागी काउन्टर मा सबै भन्दा राम्रो
कति लामो एक 50mg vyvanse अन्तिम हुन्छ